I-LG V50 ThinQ 5G sele inexabiso kunye nomhla wokumiliselwa | I-Androidsis
I-LG V50 ThinQ 5G yifowuni yokuqala yohlobo lweKorea olune-5G. Isixhobo thaca ngokusemthethweni kwi-MWC 2019 edlulileyo eBarcelona. Kwiiveki ezimbalwa emva kokunikezelwa kwayo, kwaqinisekiswa ukuba esi sixhobo siza kufika eMzantsi Korea phakathi ku-Epreli. Inyaniso, Nditsho nexabiso layo lokuthengisa liqinisekisiwe. Kodwa oko kuphehlelelwa kwalibaziseka ukuphucula ifowuni.
Ngoku sinento entsha idatha ekusungulweni kwale LG V50 kwintengiso. I-brand ibonakala ngathi sele ilwenzile utshintsho olufunwayo kwisixhobo kwaye ilungele ukubetha ezivenkileni. Kwamanye amazwe awuyi kulinda ixesha elide ukuyithenga.
Njengakwimeko yangaphambili, ukumiliselwa kwesixhobo eMzantsi Korea sele kuqinisekisiwe okwangoku. Kubonakala ngathi Umhla okhethwe luphawu nguMeyi 10. Ke ngoko, ngaphakathi kweveki ungayithenga le LG V50 ThinQ 5G kwilizwe laseAsia. Ngale ndlela, iya kuba yifowuni yesibini ye-5G ukufikelela kwilizwe.
Xa ukumiliselwa kwayo kwakulibazisekile, kwakusele kuthethiwe ukuba iyakuba ziiveki ezimbalwa. Into ebonakala iyinyani ngolu hlobo, ukusukela ngomhla wayo wokuqala wokukhutshwa yayingu-Epreli 16. Ke iza kwiiveki ezine kamva esiphelweni. Kodwa akukho datha ekusungulweni kwayo kwamanye amazwe.
Malunga nexabiso, Le LG V50 ThinQ 5G ifika ngexabiso le-925 euro ukuze itshintshe. Ifowuni ebizayo, ngokuqinisekileyo leyo yinto enokunciphisa umda kwintengiso yakho. Kodwa asinayo idatha kwixabiso eliza kuba nalo modeli ekusungulweni kwayo eYurophu.
Ngoko ke, ukusukela ngoMeyi 10 kuyakwenzeka ukuba uyithenge eMzantsi KoreaNgelixa ezinye iimarike kuya kufuneka zilinde ithutyana ukuthenga le LG V50 ThinQ 5G. Asazi ukuba imihla iza kubhengezwa kungekudala, kodwa siyathemba ukuva kuwe. Ingakumbi kuba uphawu lwaseKorea lubona le modeli njengethemba lokuthengisa kakuhle.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » I-LG V50 ThinQ 5G sele inomhla wokukhutshwa